ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သင်၏ငါးပါးကိုသုံးပြီးနေ့စွဲ-Sexy ဖြစ်လုပ်နည်း
တစ်ဦး sexy မိန်းမသည်ထိုအသွင်မြင်လာအောင်သာအထည်ချုပ်၏အနည်းငယ်အပိုင်းပိုင်းဝတ်အရူးခါးဆစ်နဲ့ pin ကို-up, မိန်းကလေးဖြစ်ပါသည်. သို့သော်, ကိုယ့်အရေပြားကို baring နှင့်ခါးရှိခြင်းထက် Sexy ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းငှါ သာ. ရှိပါတယ်, ရင်သား, နှင့်မော်ဒယ်၏တင်ပါး. သူတို့သင်သည်အဘယ်သို့ခံစားရသငျသညျဖြစ်လာကြောင်းပြောတဲ့အခါ, သူတို့မှန်. သငျသညျအရုပ်ဆိုးခံစားရလျှင်, သင့်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုသို့မျက်နှာကြက်လေ့နှင့်သင်တို့ဦးခေါင်းတစ်ခုအဆင်မပြေလမ်းအတွက်ညိတ်နိုင်ပါသည်, ဖြစ်ကောင်းသင်၏မျက်နှာကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေ. ဒါပေမယ့်သင်ကလှပ sexy ဖြစ်ကြောင်းခံစားမိလာသောအခါ, သင့်ရဲ့ကိုယ်ဟန်အနေအထားသည် သာ. ကောင်း၏, သင်ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချစွာသွားလာကြ, နှင့်သင်ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းလေ့. ဒါကြောင့်ဘယ်လိုတယောက်ရက်စွဲတစ်ခုမတိုင်မီ sexy ဖြစ်လာပါဘူး? လွယ်ကူသော. သင့်ရဲ့ငါးအာရုံသင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်ပါစို့.
ထိုစကားကိုအဝင်အဖြစ် “မျက်စိကိုစိတ်ဝိညာဉ်၏ပြတင်းပေါက်များမှာ”. တိုက်ရိုက်မျက်လုံးချင်းသင့်ရဲ့ peepers မှာကြည့်ဖို့လုံလောက်တဲ့ sexy ဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်ဒီတော့ပိုကောင်းအလွန်အစွမ်းထက်နိုင်ပါတယ်. သင့်ရဲ့မျက်ခုံးကိုချုံ့နှင့်မဆိုသွေဆံပင်ကိုဖယ်ရှား. ဒီဘက်ပါ, သင့်ရဲ့ရက်စွဲအစဉ်အဆက်သင်၏ဥစ္စာကိုချွတ်သူ့မျက်စိယူလိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
သင် sexy ဖြစ်လိုလျှင်, သငျသညျ, sexy နံ့ရတယ်. တစ်ဦးအမွှေးအကြိုင်ရွေးချယ်ခြင်းအတော်လေးစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျအခြို့သောအမွှေးနံ့သာစမ်းသပ်ဖို့တစ်စတိုးဆိုင်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်မည်သည့်ဝတ်ထားကြသည်မဟုတ်သေချာအောင်. ဒီဘက်ပါ, သင်အမှန်တကယ်သင်စမ်​​းကြည့်ရနံ့အတွက်ကြာနိုင်တယ်, ထိုသို့, ဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူမယ့်အမွှေးအကြိုင်အပေါ်ဆုံးဖြတ်အောင်. လည်း, အလွန်အကျွံကြိုတင်ရက်စွဲတစ်ခုမှအတူကိုယ့်ကိုကိုယ်ရေဖြန်းငြိမ်းသတ်ရန်ပါဘူး. သင့်ရဲ့နေ့စွဲစားပွဲပေါ်မှာဖြတ်ပြီးမှသင်၏ရနံ့ကောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့လုံလောက်စွာကိုလေပေါ်မှာပ, မအခန်းထဲအနှံ့.
နာမည်ကျော် aphrodisiacs တစ်ခုမှာမာဖြစ်ပါတယ်. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကိုတိုးမြှင့်ဖို့က၎င်း၏စွမ်းရည်ထက် ပို., အချို့အမျိုးအစားများသွပ်တွေအများကြီးမဆံ့, အဆီပြန်သောအသားအရေနှင့်အတူလူများအတွက်အကျိုးရှိသောအရာ. အရသာသင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်များအတွက်နောက်ထပ် sexy နှင့်ရင်ခုန်စရာအားရစရာစတော်ဘယ်ရီများမှာ. မသာပါကချောကလက်နှင့်အတူစားရန် sexy အသီးဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်လည်းသင့်ရဲ့ရက်စွဲကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေတစ်ဦးကို sexy အပြုံးအဘို့သင့်အံသွားခဲ whiten အထောက်အကူပြု.
Music ကိုတစ်စုံတစ်ဦး၏ခံစားချက်တင်ထားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. သင့်ထံမှသွားပါစေသီချင်းတွေကိုရှိပါတယ် “မိန်းကလေးကနောက်တံခါးကို” သို့ “sultry လိင်နတ်သမီး”. သင်တစ်ဦးအပိုထပ်တိုးလိုအပ်ခဲ့လျှင်သင်၏ရက်စွဲတွေ့ဆုံမီအလုံအလောက်ယုံကြည်မှုပေးရ, တူသီချင်းနာ​​းထောင် “ဘီယွန်းစေးအားဖြင့် Naughty Girl ", “buttons” Pussycat ရုပ်အားဖြင့်, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်နတ်သမီးထွက်ဖြစ်စေသောဘာမှမ.
တစ်ဦးကို sexy ခန္ဓာကိုယ်ထက် ပို., sexy အသားအရေရှိသည်ဖို့အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. hydrated သင့်ရဲ့အသားအရေ Keeping ပျော့ပျောင်းသူကစောင့်ရှောက်ဖို့အရေးပါနှင့်တို့ထိရန်ပျော့ဖြစ်ပါသည်. ရေအများကြီးသောက်အမြဲသင့်ရဲ့ရေချိုးပြီးနောက်ဆီလျှောက်ထား. ခြောက်သွေ့တဲ့အကြောင်းကို sexy ဘာမှမရှိဘူး, chaffed အသားအရေ.